Himalaya Dainik » केटाहरू किन विवाहित महिलालाई याै’न साथी बनाउन चाहान्छन् ?
केटाहरू किन विवाहित महिलालाई याै’न साथी बनाउन चाहान्छन् ?
47 seconds अगाडी
हाम्रो समाज मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न समाजमा पुरुषले युवती भन्दा विवाहित परस्त्रीसँग स’म्भोग गर्न मनपराउँछन् । यो मनोवैज्ञानिक स्वाभाव पनि हो । तर, परस्त्रीले पुरुषलाई कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ ।
जहिले पनि यौ’वनपूर्ण अवस्थालाई महिलाको आकर्षणसँग जोडिन्छ । पुष्ट अधर, कोमल छाला, स्वस्थ आँखा, चमक भएको केश तथा कसिलो शरीर भएका महिलालाई आकर्षक मानिन्छ । त्यसैगरी विकसित स्त’न पनि महिलाको शारी’रिक आकर्षणको मापदण्डमा पर्छ । प्रायः सबै समाजमा महिलाको आकर्षणमा कम्मर–नि’तम्ब अनुपातको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।
स्त’न पुरुषले यौ’न आनन्द प्राप्त गर्ने भएकाले नै होला, उनीहरू यसप्रति आकषिर्त हुन्छन् । स्त’नलाई महिलाको सुन्दरतासँग जोडिन्छ । प्रायः पुरुषले आफूभन्दा केही होचा महिलालाई रुचाएको पाइन्छ।
विवाहित महिलासँगको सम्बन्धमा एक किसिमको विजयबोध गर्छ । त्यसैगरी विवाहित महिला अनुभवी हुने आफ्ना चाहना स्पष्ट रूपमा भन्ने अनि नयाँ प्रयोग गर्न सजिलै मान्ने, उनीहरूमा भ’य कम
कतिपय अविवाहित महिला विवाहित पुरुषप्रति आकषिर्त भएजस्तै अविवाहित पुरुषहरू पनि विवाहित महिलाप्रति आकषिर्त हुन्छन् । पक्का भन्न नसकिए पनि यसका केही सम्भावित कारणमध्ये चर्चा गरौं ।
विवाहित महिला तर्फ अविवाहित पुरुष आकर्षित हुनाको पक्ष यौ’न रहेको छ । यौ’नस’म्बन्ध बारेको प्रस्तावका लागि अविवाहित भन्दा विवाहित सहज हुने युवाहरको अनुमान र अपेक्षा हुन्छ । पुरुष स्वभावले नै यौ’नस’म्पर्क राख्न लालायित हुन्छ । यौ’नस’म्पर्कका लागि यौ’न साथीसँगको सम्बन्धप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ । विवाहित महिलासँगको सम्बन्धमा प्रतिबद्धताको आवश्यकता नपर्ने हुनाले सजिलो हुन्छ ।
विवाह गरेका महिला विवाह नगरेका युवतीको तुलनामा अधिक आत्मविश्वासी हुन्छन् । उनीहरुको यही आत्मविश्वासका कारण अविवाहित युवा उनीहरुप्रति आकर्षित हुन्छन् । पुरुषहरुलाई विवाहित महिलाले हरेक समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्न र समस्यामा साथ दिन सक्छन् भन्ने लाग्छ ।
चुनाैती र बिजयबोध
अर्को तर्क पुरुष स्वभावले नै चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न चाहन्छ र विवाहित महिलासँगको सम्बन्धमा एक किसिमको विजयबोध गर्छ । त्यसैगरी विवाहित महिला अनुभवी हुने आफ्ना चाहना स्पष्ट रूपमा भन्ने अनि नयाँ प्रयोग गर्न सजिलै मान्ने, उनीहरूमा भ’य कम हुने जस्ता कुरा भएकाले पनि अविवाहित पुरुषहरू उनीहरूप्रति आकषिर्त हुन्छन् । विवाहित महिलाहरू यस्ता सम्बन्धका सन्दर्भमा कम त’नावमा हुन्छन्, किनभने उनीहरू भावनात्मक रूपमा परिपक्व हुन्छन् र उनीहरूका लागि खर्च गर्नुपर्ने बा-ध्यता पनि हुँदैन ।
विवाहित महिलाले त्यस्ता पुरुषसँग सामाजिक, आर्थिक भार उठाउन सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा गरेका हुँदैनन् र सम्बन्धमा प्रतिबद्धता पनि खोजेका हुँदैनन् । उनीहरूको उद्देश्य यौ’न स’म्पर्क राख्नु मात्र हुन्छ ।
विवाह गरेका महिलाले विवाह नगरेकाको तुनलामा पार्टनरको धेरै हेरचाह गर्छन् । विवाह पछि उनीहरुलाई सधै आफ्नो घर परिवारको चिन्ता हुने गर्छ । युवालाई युवतीको यस्तो हेरचाह विशेष मन पर्छ ।
विवाह पछि महिलाको हर्मोनमा परिवर्तन आउँछ । यसका कारण उनीहरुको छालामा चमक आउँछ । महिलामा आएको यस्तो परिवर्तनले पुरुषलाई आकर्षित गर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
यस्तो समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने ?
यौ’न भावनाको विकाससँगै विभिन्न किसिमका यौ’न परिकल्पना पनि गरिन्छ । यसै क्रममा विवाहित महिलाप्रति यौ’न रूपमा आकषिर्त हुन पुगिन्छ ।विवाहित महिलाप्रति आकषिर्त भए पनि उमेरको हकमा अझै पनि बढ्ने क्रममै हुनुहुन्छ । उपरोक्त कुराका आधारमा तपाईंले आफू यसरी विवाहित महिलाप्रति आकषिर्त भएको कुरालाई विश्लेषण गरेर कारण पत्ता लगाउनुभयो भने समाधानमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
माथि गरिएका आकर्षणका कुरा हुँदाहुँदै पनि विवाहित व्यक्ति यस बिषयमा सजग हुनुपर्छ । यसबाट श्रीमानलाई धो-का दिएको त हुन्छ नै र परिवार बिथोलिन र सबन्ध–विच्छे’दसम्म पनि हुन सक्छ |
कोरोना संक्रमितको संख्या ५०० नाघ्यो
३० घण्टापछि ‘कोरोना’ संक्रमितको श’व उठ्यो, तर परिवारजनले बुझेनन्
लकडाउनमा केकीको दैनिकी [१० तस्बिर]
लकडाउनमा वर्षाको नयाँ ‘लुक्स’ हेराैँ ११ तस्बिर
थप ३० जनामा ‘कोरोना’, सं’क्रमितको संख्या ४८७ पुग्यो
‘कला बेचेको हो, स्वाभिमान होइन
आज जेठ ०९ गते शुक्रबारको राशिफलः कस्तो छ तपाइको दिन ?
लिपुलेकमा राष्ट्रिय झण्डा गाड्न हिँडेका आठ युवा ‘पक्राउ’
दुई छोरा मिलेर बाबुको ह’त्या, बुहारीबाट खुल्यो रहस्य
थप ९ जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या ४५३ पुग्यो
बिहानै भक्तपुरमा ‘भूकम्प’को धक्का